Tifaftiraha guud ee Radio Daljir C/fitaax Cumar Geeddi oo caawa ka badbaaday isku day dil. – Radio Daljir
Agoosto 3, 2012 8:43 b 0
Garowe, August, 03 – Tifaftiraha guud ee Radio Daljir ahna agaasimaha Radio Daljir xarunta ay ku leedahay Gaalkacyo mudane C/fitaax Cumar (Geeddi) ayaa ka bad-baaday isku day dil oo la damacsanaa in lagu khaarajiyo.
Abaaro 7:33pm saacadu caawa markay ku beegnayd ayaa 2 dhalinyaro ah oo ku hubaysan bistoolado waxay tifaftiraha ku weerareen irida hore ee idaacadda Daljir Garowe xilli uu kasoo baxay shaqada idaacadda.
Agaasime Geeddi oo sida ay wax u dhaceen uga waramay Radio Daljir ayaa yiri? “2 nin ayay ahaayeen, mid waxaa uu istaagay gaariga gadaashiisa dambe, midna waxaa uu soo istaagay daaqada aan gaariga kasoo galay, waxaa uu igu soo riday 2 xabadood,? xabadihii kor ayay aadeen,? Alle waa iga bad-baadiyay, waxaa xabad sadexaad riday kii kale, dabadeedna way carareen”.
Saacad un-kaddib waxaa goobta soo gaaray saraakiil ka tirsan ciidamada ammaanka kuwaasoo bilaabay baaritaano ay ku baadigoobayaan raadadka dhagar-qabayaashii isku-dayga dil tifaftiraha la damacsanayd.
Xaaladda C/fitaax Cumar Geeddi oo ah tafaftiraha guud, ahna agaasimaha Daljir xarunteeda Gaalkacyo ayaa ah mid wanaagsan, waxaana socda baaritaano ay hay’adaha amnigu illaa xilligaan ay wadaan.
May-3-2012 habeen arbaco ah ayay ahayd markii Allaha u naraxiistee Gaalkacyo lagu dilay wariye Farxaan Jeemis Cabdulle oo ka tirsanaa shaqaalaha Daljir xarunteeda Gaalkacyo, waxaana muddooyinkaan-dambe magaalada Garowe lagu arkayaa dilalka qorshaysan oo horay aan loogu arki-jirin.